Tsvaga izvo vatengi vari kutaura nezvako
China, July 26, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Munyika yanhasi yezvemagariro, izvo zvinotaurwa nevatengi pamusoro pechiratidzo zvinokwezva zvakanyanya kupfuura chero kushambadzira kana zvakabhadharwa zvemukati zvinogona kuendesa. Hazvishamise kuti vashambadzi vanonetsa nzeve dzavo kuti vaedze uye vanzwisise zviri kutaurwa nemutengi pamusoro pechiratidzo pamusoro penzvimbo yemagariro. Lithium's chaiyo-nguva yemagariro midhiya yekutarisa mhinduro inobvumidza mushambadzi kuteerera, kuyera uye kuteedzera izwi remutengi.
Lithium Mutengi Intelligence Center inokupa maturusi ekuongorora zviitiko zvezvemagariro uye nekugadzira zvakadzama zvevatengi kusangana muLithium Communities, Facebook, Twitter, uye mamirioni enzvimbo munzvimbo dzese dzewebhu. Takabatana nharaunda analytics, pasocial media analytics, uye zvemagariro midhiya kubatanidzwa mune imwechete, yakasanganiswa interface kuti zvive nyore kuenda kubva pakuziva kuita.
Pamwoyo weLithium yemagariro enhau yekutarisa mhinduro iri padhibhodhi. Kana mushandisi akagadzira kutsvaga achishandisa zita rezita kana chero rimwe kiyi izwi, Lithium inotsvaga akasiyana siyana enhau enhau uye inowoneka padhibhodhi ine runyorwa rwezvinyorwa kana makotesheni uko iro kiyi izwi rakawanikwa. Iyo dashboard inopawo mairafu anoshanda analytics kumhedzisiro. Injini inotora kune ese echokwadi nguva data uye nhoroondo dhata uye inovhara pamusoro pemamirioni zana mablog, mapikicha uye mavhidhiyo ekugovana masosi, makuru masayiti enhau uye maforamu kunze kwenzvimbo dzinozivikanwa dzemagariro enhau senge Facebook ne Twitter.
Kubva pane data rekutsvaga, injini yeLithium inoburitsa mazwi akadai se wishes, Anoda, vanoda, uye kuvenga kuteedzera manzwiro otomatiki. Mushambadzi anokwanisa kuisa pamusoro pekuwandisa kwevanhu kuita zvakanaka-kutarisa kwakadai kwekutevera. Kune zvakare maonero ekukurudzira anotendera mushandisi kuti aone mafeni uye vateveri vane pesvedzero huru munharaunda, zvichikubvumidza kuti unzwisise kuti mutengi ndiani uye zvingakanganisa sei kana iwe uchigadzirisa nyaya kana kupindura pamhinduro nenzira ivo vanozokoshesa nekuparadzira iro shoko pa.
Kunyangwe kutaridzika kwekutarisa kwedashboard kwaizobvumidza mushambadzi kuti anzwisise huwandu hwevatengi manzwiro. Chidzidzo chakadzama chinobvumidza mushambadzi kuti asangoita mapindiro akakodzera kuti abatanidze mutengi zvirinani uye kuchengetedza mukurumbira asiwo kujekesa chero matambudziko ari mubhizimusi maitiro. Semuenzaniso, fungidziro yakaipa kubva kune imwe nzvimbo yenzvimbo inogona kuve chinokonzeresa kutsvaga mweya, iyo inogona kupedzisira yakuratidza dambudziko kusvika mukutakura kwakashata!
Uchishandisa Lithium Customer Intelligence, unogona:
Natsiridza Kuita kweMagariro Zvirongwa: Wedzera peerto-peer mazinga ekubatanidzwa uye simbisa izvo zviwanikwa zviri kupindura zvakananga kune vezvenhau zvinyorwa
Ziva uye Ratidza Kukurudzira. Dzorera mafeni kuva superfans vanoita sekuwedzera kwekushambadzira kwako, kutengesa, uye mapoka ekutsigira
Iva iyo Center yeSocial Insights: Chengeta munwe wako pakutsva kwemisoro inopisa, kuona kwechiratidzo, uye zviitiko zvemukwikwidzi
Izvo zvinoshandiswa zveLithium zvinopfuura kupfuura kutariswa kwenzanga. Kudya muchikwata chemukwikwidzi sezwi rakakosha kunoita kuti mushambadzi anzwisise kuti vatengi uye nharaunda inowirirana sei nevakwikwidzi vako zvakare! Kunyangwe iwe ukasasarudza kushandisa yavo chikuva, ita shuwa yekutarisa yavo zviwanikwa zvinoshamisa pasocial media, simba, huchenjeri hwevatengi, nezvimwe.
Iyo Goridhe Rush yeTop Level Domains